Wararkii ugu dambeeyay ee Arrimaha Booqashada Madaxweyne Farmajo ee Hargeysa - Jowhar Somali news Leader
Home News Wararkii ugu dambeeyay ee Arrimaha Booqashada Madaxweyne Farmajo ee Hargeysa
Wararkii ugu dambeeyay ee Arrimaha Booqashada Madaxweyne Farmajo ee Hargeysa
Waxaa isa soo taraya hadal haynta ku saabsan booqasho la qorsheeyay inuu Madaxweyne Farmaajo uu ku tagayo magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland.
Wararkan oo ahaa mid si hoose dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay la hadal hayay ayaa waxaa maanta si rasmi ah u shaac bixiyay guddoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salaymaan Maxamuud Aadan oo golaha guurtida u sheegay in uu jiro qorshahaas balse ay ka soo horjeedaan.
Wasiirka Arrimaha dibada ee Somaliland oo wax laga weydiiyay warkan ku saabsan booqashada Madaxweyne Farmaajo ayaa ka gaabsaday,balse waxa uu sheegay in dhowaan Madaxweynaha Somaliland uu ka hadli doono.
Sidoo kale Guddoomiyada xisbiga mucaaradka ee UCID Feysal Cali Waraabe ayaa sheegay in warka ku saabsan booqashada Farmaajo ay ahayd mid hore u jirtey balse uu si weyn ugaga soo horjeedo.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA oo wareysatay Feysal Cali Waraabe ayaa ku tilmaamay booqashada mid aan la aqbali karin.
“Roog cas in loo fidiyo Madaxweyne Muuse kadibna afka loo soo geliyo Farmaajo ayaa imanaya Hargeysa ma ahan mid na qabata,waayo wax heshiis ah nagama dhexeeyo Soomaaliya.”ayuu yiri Feysal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga UCID.
Feysal Cali Waraabe ayaa ku hanjabay in la qaban doono shir deg-deg ah oo ah heer qaran ah kaasi oo loogaga arrinsanayo arrimahan ka soo cusboonaday siyaasada Somaliland.
“Madaxweyne aan tegi Karin gobalada uu maamulo sida Galmudug iyo Puntland ma aha in uu yiraahdo Hargeysa ayaan tagayaa ma aha mid aan aqbalaymo.”ayuu sii raaciyay hadalkiisa Feysal Cali Waraabe.
Illaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowlada federalka oo ku saabsan booqashada la sheegay in Madaxweyne Maxamed Cabdulahi Farmaajo uu ku tagayo magaalada Hargeysa.